चन्द्र अभियान सफल पार्ने इजरायलको सपना भयो अधुरो « NagarikTimes
चन्द्र अभियान सफल पार्ने इजरायलको सपना भयो अधुरो
२ बैशाख २०७६, सोमबार १२:३४
काठमाडौं : चन्द्रमामा पुग्ने इजरायलको पहिलो अभियान असफल भएको छ । चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने बित्तिकै उसको अन्तरीक्षयान बेरेशिट दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । बेरेशिटको इन्धनमा खराबी आएको थियो र अवतरण गर्ने सया रोवरका ब्रेकिंग सिस्टम असफल भयो ।
इजरायलको उक्त चन्द्रमा मिसनको मुख्य उद्देश्य चन्द्रमाका तस्वीर खिच्नु र चन्द्रमामा केही प्रयोगहरु गर्नु थियो । यदि यसमा सफल भएको भए इजरायल सफलतापूर्वक चन्द्रमामा पुग्ने विश्वको चौथो देश बन्ने थियो । अहिलेसम्म रुस, अमेरिका र चीनले आफ्ना अन्तरीक्षयानलाई चन्द्रमामा अवतरण गराइसकेका छन् ।
चन्द्रमामा पुग्नका लागि सात हप्ताको यात्रा पश्चात मानव रहित उक्त इजरायली यान चन्द्रमाको सतहबाट १५ किलोमिटर टाढा यसको अन्तिम कक्षमा पुगेको थियो ।
मिसन असफल भएको घोषणा गर्नेबेला के भयो ?
इन्जिन स्टार्ट गर्नका लागि अन्तरीक्षयानलाई रिसेट गरिरहेको उनले बताएका थिए । केही सेकेण्डपछि इन्जिन स्टार्ट भयो । त्यसपछि कमान्ड सेन्टरमा रहेका मानिसहरुले ताली बजाए । तर केही क्षणमै अन्तरीक्षयानसँग सम्पर्क विच्छेद भयो । योसँगै अभियान समाप्त भयो ।
अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित केप केनेभरल एयर फोर्स स्टेसनबाट उक्त चन्द्र यान प्रक्षेपण गरिएको थियो । स्पेस आइएल र इजरायल अन्तरीक्ष एजेन्सीको संयुक्त पहलमा सुरु भएको उक्त परियोजनामा १० करोड डलर खर्च भएको छ ।
चन्द्रमामा पुग्न किन लाग्यो ३ हप्ता ?
चन्द्रमामा पुग्नका लागि केवल केही दिनको समय लाग्नुपर्ने हो । तर यो अन्तरीक्ष यानले चन्द्रमासम्म पुग्नका लागि ३ हप्ताको समय लगायो । आखिर किन ?
बेरेशिटले चन्द्रमासम्म पुग्न लामो समय लगाएको थियो ।
चन्द्रमामा उत्रिन किन अप्ठेरो भयो ?
चन्द्रमामा कहिले को पुग्यो ?
अहिलेसम्म चन्द्रमामा केवल ३ वटा देशले आफ्ना अन्तरीक्षयान उतार्न सफल भएका छन् । अन्तरीक्षमा चलिरहेको ६० वर्षे अनुसन्धानका क्रममा सबैभन्दा पहिले १९६६ मा सोभियत संघले लुना(९ लाई चन्द्रमामा उतारेको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि नै मानव जातिका लागि ठूलो कोशेढुंगा सावित गर्दै २१ जुलाई १९६९ मा अमेरिकाका निल आर्मस्ट्रंगले चन्द्रमामा पाइला टेकेर इतिहास रचे ।
प्रकाशित मिति: २ बैशाख २०७६, सोमबार १२:३४
पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न
वीरगञ्ज : नेपाल र भारत दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन
मोबाइल र कम्प्युटरमा काम गर्ने व्यक्तिमा ‘भिजन सिन्ड्रोम’ को समस्या
काठमाडौं : वर्तमान समयमा कुन ठाउँ नहोला जहाँ बच्चाबच्चीको हातमा मोबाइल नभएकोस । आजकालका बच्चाहरु